China 5.0-ton Forklift Trucks Manufacturer na Supplier | Wilk
WIK 5.0-ton Forklift ụgbọala
Nhazi ọkọlọtọ: Chaoyang 6102 engine dizel
Central na ndịda mmiri nnyefe
Okpokoro ụzọ abụọ nke mita atọ
Ezi taya ọhụrụ
Ngwunye tool / service pack
Nkwupụta arụmọrụ: mgbakọ nke ọwụwa anyanwụ engine,, ike, nchebe gburugburu ebe obibi
South Central nnyefe, ezigbo, ọrụ
Linde sterịn, haịdrọlik cylinder, SMC nkịtị mkpuchi mkpuchi
Hongchang elu-edu ụzọ etiti ígwè, ọ bụghị, deform
Ihe ohuru, ike siri ike, ezigbo ihe na-adọrọ adọrọ,
Nhazi nhazi: Chaoyang engine, engine engine engine
Bubata engines Islington
Manual mmiri mmiri nnyefe, akpa mmiri nnyefe
Akụkụ abụọ 3.0 m, 3.3 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 m etiti ụzọ
Akụkụ abụọ 3.0 m, 3.3 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 m etiti ụzọ zuru oke
Akụkụ atọ 4.5 m, 4.8 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 m zuru oke ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ zuru oke
Ezigbo taya ọhụrụ / taya siri ike, taya ọwụwa anyanwụ / taya siri ike, nchebe gburugburu ebe obibi siri ike
Dị ka dị iche iche ngwongwo, nzukọ nke dị iche iche nwere, dị ka n'akụkụ nnofega, owu akpa clip
Akwụkwọ mpịakọta akwụkwọ, obere katọn, wdg
WIK Isi oru nhazi
.Dị. WIK50 .Dị. WIK50
Dị ike Dizel. Full ogologo dịghị ndụdụ mm 3430。
Gosiri ibu n'arọ 5000。 Mbara zuru ezu mm 2235。
Ibu center mm 600。 Oke mbuli elu nke ndụdụ (na igbochi shelf) 4380。
Na-eweli elu mm 3000。 Zọ etiti ala dị elu mm 2500。
Ewelite elu mm 205。 Igwe ihu. 8.25-15-14PR
Ndụdụ ndụdụ mm 1220 × 150x60 N'azụ wiil 8.25-15-14PR
Ọnụ ụzọ ahụ na-ehulata / 6/12。 Wheelbase mm 2250。
Opekempe na-atụgharị okirikiri mm 3250。 Wheel anya n'ihu wheel / n'azụ wheel mm 1470/1700。
Kacha nta nri n'akuku stacking ọwa obosara mm 5500。 Onwe onye ibu ibu ibu Kg 7980。
Kacha nta-n'akụkụ aka nri obosara mm 2960。 Batrị batrị / V / Ah (12/80) × 2
Opekempe ala nwechapụ mm 200。 Modeldị njin CY6102BG6
N'elu etiti dị elu mm 2469。 Gosiri ike kw / rpm 81/2500。
N'ihu overhang mm 610。 Gosiri torque Nm / rpm 353/1700。
Travelgba ọsọ ọsọ kachasị zuru km / h 26。 Bodle X njem mm 102x118
Ogogogo ọsọ ọsọ kachasị karịa mm / m420 400。 Ọnụ ọgụgụ nke cylinders 6。
Oke traction jupụtara KN 51.4。 Mgbapụ L 5.785。
Oke ịrị ikike% 20。 Ike mmanụ ụgbọala L 120。
Full ogologo na ndụdụ mm 4650。 Na-arụ ọrụ mgbali Mpa 20。
Ọrụ forklift nwere ike belata ntinye ọrụ na ike ọrụ, melite arụmọrụ ọrụ, ma jiri ọnọdụ nke ụlọ, ụgbọ ala, na ụlọ nkwakọba ihe zuru oke. Ọ na-ebelata oge ọrụ nke ibu, ibudata, njikwa, na ịkwakọba, na-agba ọsọ ntụgharị nke ụgbọ ala na ụgbọ mmiri, ma melite ogo nchekwa nke ọrụ ahụ.
Igwe oku forklifts na-ejikarị mmanụ dizel, mmanụ ụgbọala ma ọ bụ mmanụ gas na-aqueụ mmiri iji nye ike. Ha dị arọ ma nweere onwe ha. A na-ejikarị ha eme ihe n’ebe ọrụ nwere nnukwu mkpọda, okporo ụzọ na-adịghị larịị, ihe ndị dị arọ, na ọnọdụ ihu igwe siri ike.
Ka m webata usoro radiator nke forklift combustion dị n'ime.
Usoro radiator gụnyere radiator na windshield, wdg A na-akpọkwa radiator tank mmiri, nke mejupụtara akụkụ atọ: ọnụ ụzọ mmiri, ụlọ mmiri na isi iyi ọkụ. Mmiri mmiri jụrụ oyi (mmiri) na-asọba na igwe radiator, ikuku ahụ na-agafekwa na mpụga isi radiator, nke mere na ọkụ a na-etinye site na mmiri dị jụụ site na injin ọkụ ọkụ dị n'ime ya nwere ike ịfefe ya n'èzí ikuku, nke mere na mmiri jụrụ oyi wedata igbasa ọzọ. Ọrụ nke ikuku ihu bụ ime ka ikuku ahụ na-amịpụta site na onye ofufe ahụ gafere radiator iji melite arụmọrụ nke onye ofufe.
Forklifts dị n'ime ụlọ na-ejikarị mmanụ dizel, mmanụ ụgbọ ala, gas mmanụ ma ọ bụ injin gas dị ka ike, nwere ikike ibu nke 1.2 ruo 8.0 tọn, yana ọwa na-arụ ọrụ obosara nke 3.5 ruo 5.0 mita. N’ịtụle ikuku anwuru na mkpọtụ, a na-ejikarị ha eme ihe n’èzí, ebe obibi ma ọ bụ Ebe ndị ọzọ na-enweghị ihe pụrụ iche achọrọ maka anwụrụ na mkpọtụ. N'ihi mma nke mmeju mmanụ, ọ nwere ike ịchọpụta ọrụ na-aga n'ihu ma nwee ike ịrụ ọrụ na gburugburu obi ọjọọ (dịka ụbọchị mmiri ozuzo).
Ọ bụrụ na mgbapụta mmiri anaghị arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ na etiti etiti n’etiti ịkwọ ụgbọ ala na wiil nke a na-anya azụ nke pole na-ezighi ezi, eriri ahụ ga-atọpụ ma na-amị amị, nke mere na ọsọ nke wheel a na-anyagharị ga-ada, ọsọ nke mgbapụta mmiri ga-ada, na ọnụego mmiri mmiri mgbapụta ga-ada; A na-egbochi okporo ụzọ ma mmiri adịghị mma; ma ọ bụ ihe nrụrụ thermostat ahụ na mmiri na-ekesa nke sistemụ niile na-akwụsị; ihe ndị a dị n'elu ga-eme ka mmiri dị n'ime mmiri nke injin na-ere ọkụ na-ebili elu, na-eme ka usoro jụrụ oyi dị ọkụ. Na mgbakwunye, injin combustion dị n'ime ga-ekpo ọkụ sistemụ jụrụ oyi n'ihi nrụrụ ndị ọzọ dịka oge mgbanye na-ezighi ezi.
1. Forklift Trucks dị obere, ma nwee ezi nkwụsi ike ma dị mma maka ịdọrọ. A na-eji ha maka oge na-akparaghị ókè. A na-ejikarị ha eme ihe n'èzí. N'iji ya tụnyere mmanụ ụgbọala, mmanụ dizel nwere ike dị mma (ọ dị mfe ikpo oke ọkụ na obere ọsọ, ikike dị mkpirikpi, yana ikike ịrụ ọrụ ogologo oge), yana ọnụ ahịa mmanụ ụgbọ ala dị ala. Agbanyeghị, ha nwere oke ịma jijiji, mkpọtụ mkpọtụ, mbugharị dị ukwuu, ntọala onwe onye, ​​na ọnụ ahịa dị elu. Ibu ahụ nwere ike ịdị site na tọn 0,5 ruo tọn 45.
2. Forklift Trucks dị obere, ma nwee ezi nkwụsi ike ma dị mma maka ịdọrọ. A na-eji ha eme ihe maka oge na-akparaghị ókè ma na-ejikarị ya eme ihe n'èzí. Igwe mmanụ ụgbọala nwere obere ọdịdị, ngbanwe ọkụ, ike nrụpụta dị elu, mkpọtụ na-arụ ọrụ dị ala na ịma jijiji, yana ọnụ ala dị ala. Agbanyeghị, mmanụ ụgbọ ala nwere ikike mkpụmkpụ dị mkpụmkpụ karịa, ike ịrụ ọrụ ogologo oge, yana ọnụego mmanụ ụgbọ ala dị ntakịrị. Ibu ahụ nwere ike ịbụ tọn 0,5 ruo tọn 4.5.
3. Idozi mmanu mmanu mmanu mmanu mmanu mmanu mmanu mmanu (aha zuru ezu LPG) bu ihe mmanu mmanu bu ihe eji edozi mmanu mmanu mmanu mmanu mmanu, nke gbadara na LPG forklift, nke enwere ike iji gbanwee n'etiti mmanu na mmanu. gas site na mgba ọkụ. Uzo abuo nke LPG forklifts bu na anwuru oku di nma, na ahihia nke hydrolyzed carbon (CO) kariri nke igwe mmanu. Ego mmanụ ụgbọ ala dị ala (15KG nke gas na-egbu mmiri ruru lita 20 nke mmanụ ụgbọala), ọ na-ejedebe na arụmọrụ ime ụlọ na ịjụ obere gburugburu ebe obibi.
Nke gara aga: .0gbọala Forklift 7.0-ton
Osote: 5.0 ton dizel pụrụ-ụzọ Forklift